China Forged Alloy Wheel Rim ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Hanvos
အချင်း 19-22 လက်မ
ကား Make တစ်ခုခု
အရွယ်အစား 19/20/21/22 လက်မ
အရည်အသွေး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အလွိုင်းဘီးများ
စတိုင် ခေတ်မီ Desgin
အောင်လက်မှတ်များ DOT / ISO TS16949
အရောင် အရောင်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ခြင်း။
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော သင်၏ကိုယ်ပိုင်မွမ်းမံထားသောဘီးများ အစုံလုပ်ပါ၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို သင့်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ဘီးအတုများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုဘောင်များကို သင့်ကားဒေတာအရ ချိန်ညှိနိုင်သည်။သင့်ကားကို ပိုမိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန်အတွက် သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော ဘီးများ၏အရောင်နှင့် မျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုလည်း သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
3. စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/မှိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောတင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
4. သင့်မက်ဆေ့ဂျ်အတွက် 12 နာရီအတွင်း သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်းပြန်ပါမည်။
5. ပို့ဆောင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များ၏ အချက်အလက်များကို ခြေရာခံခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး ထုတ်ကုန်ကို လက်ခံရရှိသည့်အချိန်အထိ နှစ်ရက်တစ်ကြိမ် သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်အား အကြောင်းကြားပါမည်။ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့ကို စမ်းသပ်ပြီး တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ။သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်အဖြေတစ်ခုပေးပါမည်။
အာမခံသည် ဝယ်ယူမှုအထောက်အထားဖြင့် မူရင်းဝယ်သူနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ထားသည့် မူရင်းကားအတွက်သာ သက်တမ်းတိုးပါသည်။အာမခံသည် လွှဲပြောင်း၍မရပါ၊ တပ်ဆင်သည့်နေ့မှ5နှစ်အထိ သက်တမ်းရှိသည်။ဤအာမခံနှင့်ဆက်စပ်နေသော ပို့ဆောင်ခနှင့် အခွန်အားလုံးကို သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်များကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီအစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဝယ်သူ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို ပစ္စည်းနှင့်/သို့မဟုတ် လက်ရာတွင် ချို့ယွင်းနေပါက၊ ဝယ်သူသည် တစ်စုံတစ်ခုကို ညွှန်ပြပြီး ရက် 30 အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းပြန်ပို့ပေးရပါမည်။အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်များဖြင့် ချို့ယွင်းနေသော ပစ္စည်းများအားလုံးကို အခမဲ့ လဲလှယ်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခမှာ ဝယ်ယူသူ၏ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
လမ်းကြမ်း၊ ပြိုင်ကား၊ ထုတ်ကုန်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ၊ ဂရုပြုမှုမရှိခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့် အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင် ထုတ်ကုန်များအတွက် မှားယွင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားပါက အာမခံသည် ပျက်ပြယ်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ ထုတ်လုပ်သူမှ ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်သော အခြားထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ပြင်ပမျက်နှာပြင်၊ အတွင်းပိုင်းယိုယွင်းမှု၊ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းအပါအဝင် ပုံမှန်မောင်းနှင်မှုအခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် နေ့စဉ်အဝတ်နှင့် မျက်ရည်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။စုတ်ပြဲပျက်စီးခြင်းများကို ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်သောကြောင့်၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများသည် ထုတ်ကုန်များ၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ယခင်- လုပ်ငန်းသုံးကားအတွက် အလူမီနီယံဘီးအတု
နောက်တစ်ခု:5Spoke Alloy Wheels အတုများ